ဂလစ်ဆရင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
en:Preferred IUPAC name
Molar mass ၉၂.၀၉ g·mol−1
ရုပ်အဆင်း colorless liquid
သိပ်သည်းမှု 1.261 g/cm3
အရည်ပျော်မှတ် ၁၇.၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၆၄.၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်; ၂၉၀.၉ ကယ်လ်ဗင်)
ရေဆူမှတ် ၂၉၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၅၅၄ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်; ၅၆၃ ကယ်လ်ဗင်)
ရေငွေ့ ဖိအား 0.003 mmHg (50°C)
ပျစ်စေးမှု 1.412 Pa·s
Flash point ၁၆၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၃၂၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်; ၄၃၃ ကယ်လ်ဗင်) (closed cup)
၁၇၆ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် (၃၄၉ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်; ၄၄၉ ကယ်လ်ဗင်) (open cup)
ဂလစ်ဆရင်း (အင်္ဂလိပ်: Glycerol) /ˈɡlɪsərɒl/ သည် အရောင်ကင်း၍ အနံ့ မထင်ရှားသော အချိုရည်ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖြစ်သည်။ ရေထက် လေး၍ ရေတွင် ကောင်းစွာပျော်သည်။ အဆီနှင့် ဆီစစ်စစ်မှန်သမျှတွင် ဂလစ်ဆရင်းပါသည်။ ဂလစ်ဆရင်းကို အလှဆီဟူ၍လည်း သိကြသည်။ သကြားမှ ကစော်ဖောက်ယူရသော အရက်များတွင် ဂလစ်ဆရင်း အနည်းအကျဉ်းပါ၏။ ဂလစ်ဆရင်းကို ဆပ်ပြာလုပ်ငန်း၌ ဘေးထွက်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြင့် အများအပြားရရှိသည်။ ဂလစ်ဆရင်းစစ်စစ်ကို ဂလစ်ဆရိုဟု ခေါ်ကြသည်။ ဓာတုဗေဒ အလိုအားဖြင့် ထရိုင်ဟိုက်ဒရစ်အယ်လကိုဟောဟု ခေါ်၍ ဓာတုသင်္ကေတမှာ ဟဂ္ဂ၃ ံ၅ (ဥံ)၃ ဒ္ဒ ဖြစ်၏။ အယ်လကိုဟောအစုတွင် ပါဝင်သော်လည်း ဂလစ်ဆရင်း၌ မူးယစ်စေတတ်သော သတ္တိအနည်းငယ်မျှ မရှိချေ။
ဂလစ်ဆရင်းသည် ပစ္စည်းများစွာကို အရည်ပျော်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ထင်းရှူးစေးကဲ့သို့သော ပစ္စည်းမျိုးကို ကောင်းစွာ အရည်ပျော်စေနိုင်သည်။ အဝတ်၌စွဲသော ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်အစွန်းအထင်းမျာကို ဂလစ်ဆရင်းနှင့် တိုက်ချွတ် ဆေးကြောလျှင် အစွန်းအထင်းပျောက်သည်။ ဂလစ်ဆရင်းကို နိုက်ထရိုဂလစ်ဆရင်း၊ ဒိုင်းနမိုက်စသော ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးများသည်။ ဆဲလိုဖိန်းနှင့် ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရာ၌လည်း သုံးသည်။
ဂလစ်ဆရင်းသည် မခြောက်သွေ့သောတတ်သော ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကြောင့် စီးကရက်နှင့် ဆေးတံသောက်ဆေးများတွင် ရောစွက်အသုံးပြုကြသည်။ ချို၍စေးသော သတ္တိရှိခြင်းကြောင့် ဆပ်ပြာ၊ အလှဆီစသော အလှကုန်များ၊ ဘယဆေးများ၊ သရေစာမုန့်များပြုလုပ်ရာတွင် ဂလစ်ဆရင်းကို အများ အစား အသုံးပြုကြသည်။ ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ်ဖြင့်လည်း သုံးကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards #0302။ National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)။
↑ "Viscosity of Glycerol and Its Aqueous Solutions" (1951). Industrial & Engineering Chemistry 43 (9): 2117–2120. doi:10.1021/ie50501a040.
↑ Lide, D. R., ed. (1994)။ CRC Handbook of Data on Organic Compounds (3rd ed.)။ Boca Raton, FL: CRC Press။ p. 4386။
↑ Oxford dictionary: definition of glycerol (British & World English)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂလစ်ဆရင်း&oldid=358170" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ မတ် ၂၀၁၇၊ ၁၇:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။